Vaovao - Ireo mpanamboatra sakafo fanampiny dia heverina fa tena eo ambany fitarihana federaly vaovao
Ireo mpanamboatra sakafo fanampiny dia heverina fa ambany fitarihana federaly vaovao
Ny Coronavirus dia nampitombo be ny fangatahan'ny mpanjifa amerikana amin'ny famenon-tsakafo marobe, na ho an'ny fanatsarana ny sakafo mandritra ny krizy, fanampiana amin'ny torimaso sy fanamaivanana ny fihenjanana, na fanohanana hery miasa mahery vaika hanatsarana ny fanoherana amin'ny ankapobeny ny fandrahonana ara-pahasalamana.
Mpanamboatra famenon-tsakafo marobe no nanamaivana ny asabotsy taorian'ny Cyberecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) ao amin'ny departemantan'ny Security Homeland Security dia namoaka torolàlana manokana momba ny mpiasa fotodrafitrasa tena ilaina mifandraika amin'ny COVID-19, na ny valanaretina coronavirus.
Ny kinova 2.0 dia navoaka tamin'ny faran'ny herinandro ary namorona manokana ireo mpamokatra famenon-tsakafo — ary indostria maro hafa — izay ny mpiasa sy ny fiasan'izy ireo dia azo heverina ho afaka amin'ny baiko mipetraka any an-trano na any amin'ny toeram-pialofana izay mamely fanjakana maro.
Ny torolàlana CISA teo aloha dia niaro be ny ankamaroan'ireo indostria ireo tamin'ny sokajy mifandraika amin'ny sakafo na ny fahasalamana, ka noho izany ny fandraisana manokana dia noraisina ho an'ireo orinasa ao amin'ny indostria voalaza.
"Ny ankamaroan'ny orinasan'ny mpikambana ao aminay dia te-hihazona malalaka ary mijanona misokatra hatrany amin'ny fiheverana fa ampahany amin'ny sehatry ny sakafo na ny sehatry ny fikarakarana ara-pahasalamana izy ireo," hoy i Steve Mister, filoha sady tale jeneralin'ny Council for Responsible Nutr (CRN ), tamin'ny resadresaka nifanaovana. “Ny ataon'ity dia manazava tsara. Ka raha misy olona avy amin'ny mpampihatra lalàna eo amin'ny fanjakana tokony hiseho ary manontany hoe: 'Fa maninona ianao no misokatra?' afaka manondro mivantana ny fitarihana CISA izy ireo. ”
Nanampy i Mister hoe: “Rehefa nivoaka ny fihodinana voalohany an'ity memo ity dia natoky izahay fa ho ampidirina amin'ny fintinina… fa tsy nilaza mazava ny famenon-tsakafo. Ianao dia toa tsy maintsy namaky teo anelanelan'ny andalana mba hamakiana azy ho ao anatiny. ”
Ny torolàlana nohavaozina dia manampy antsipiriany lehibe amin'ny lisitr'ireo mpiasan'ny fotodrafitrasa tena ilaina, manampy ny fahaiza-manao amin'ny sehatry ny fitsaboana lehibe kokoa, ny fampiharana ny lalàna, ny fitaterana ary ny sakafo sy ny fambolena.
Ireo mpanamboatra famenon-tsakafo dia voalaza manokana tamin'ny sehatry ny fikarakarana ara-pahasalamana na orinasam-pahasalamam-bahoaka, ary voatanisa amin'ny indostria hafa toy ny bioteknolojia, mpaninjara fitaovam-pitsaboana, fitaovam-piarovana manokana, fanafody, vaksinina, na vokatra vita amin'ny lamba famaohana sy taratasy aza.
Indostria voaaro vaovao vaovao voaaro dia manomboka amin'ny mpiasan'ny fivarotana sy ny fivarotam-panafody, hatramin'ny mpamokatra sakafo sy mpamatsy, hatramin'ny fizahana biby sy sakafo, hatramin'ny mpiasan'ny fahadiovana sy ny pesta.
Ny taratasy fitarihana dia manamarika manokana ny tolo-kevitr'izy ireo amin'ny farany dia mpanolotsaina voajanahary, ary ny lisitra dia tsy tokony horaisina ho torolàlana federaly. Ny fahefana isam-batan'olona dia afaka manampy na mampihena ireo sokajin'ny mpiasa ilaina miorina amin'ny zavatra takiny sy ny fahalalany manokana.
"AHPA dia mankasitraka fa ny mpiasa manampy amin'ny famenon-tsakafo dia voafaritra manokana ho 'fotodrafitrasa tena ilaina" ao amin'ity torolàlana farany avy amin'ny Departemantan'ny Security Homeland ity, "hoy i Michael McGuffin, filohan'ny American Herbal Products Association (AHPA), raha ny filazany tamin'ny mpanao gazety. famotsorana “Na izany aza… ny orinasa sy ny mpiasa dia tokony hanamarina ny tolo-kevitry ny fanjakana sy ny eo an-toerana amin'ny famaritana fepetra momba ny asa izay mendrika ho fotodrafitrasa tena ilaina.”